Siyashuba isiteleka eCoastal College | IOL Isolezwe
Siyashuba isiteleka eCoastal College
Isolezwe / 1 June 2012, 12:33pm /
ABAFUNDI baseCoastal KZN FET College, eMlazi kwa-V behleli ngaphandle kwamasango ekolishi emuva kokunikwa umbiko othi abaphume baphele kulo. Isithombe: NQOBILE MBONAMBI
SIQHUBEKA nokushuba isimo ekolishi lokucija ngamakhono iCoastal KZN FET College kwa-V eMlazi njengoba lesi sikhungo sivaliwe emuva kokuteleka kwabafundi.
Abafundi bakulesi sikole bebekake amasango izolo emuva kokuthi bethole izincwadi ezibatshela ukuthi abaphume baphele emagcekeni aso. Lokhu kulandela ukuteleka kwabo ukungena emakilasini bethi akususwe esikhundleni abaphathi bekolishi.
Izolo laba bafundi abakhale ngokungatshelwa ngesikhathi ukuthi kumele bahambe bathe bafuna ukuthi lingavalwa ikolishi kepha kulungiswe lokhu abakhala ngakho.
Ohola isigungu esimele abafundi eCoastal KZN College uMfundo Mokoena uthe bafuna iziphathimandla zaleli kolishi zivumele abafundi bahlale ngaphakathi futhi baqhubeke nokufunda kuze kulungiswe izinkinga zalo.
“Inkinga enkulu ukuthi iziphathimandla zivale ikolishi ngoba zingafuni ukulalela izikhalazo zabafundi. Iningi lezinto abafundi abakhala ngazo izinto ezikade zaba yinkinga kuleli kolishi kodwa njalo uma kukhulunywa ngazo bangafuni ukubhekana nazo,” kusho uMokoena.
Abafundi bateleke emuva kokuthi kuxoshwe abanye abafundi abebengatholanga imiphumela yabo yokufunda.
Basole nomphathi wekolishi uMnuz Nkosinathi Mchunu ngokungaliphathi ngendlela ikolishi njengoba bethe sebamtshela ngokungangeni kwabanye bothisha emakilasini nokungahambi kahle kwezinto ezindaweni zokuhlala abafundi.
U-Anele Zulu (21) waseNkandla ongomunye wabafundi kuleli kolishi ukhale ngokunganakekelwa kwekolishi nezindlu okuthiwa kuhlala kuzo abafundi abangu-14 indlu ngayinye.
“Ezindlini sifakwa simpintshane kuthiwe asihlanganise imibhede ngisho nezindlu zangasese azisebenzi. Uma sikhalaza noma yingani esiyibona ingahambi kahle kuthiwa asikwazi ukukhalaza ngoba sikhokhelwa wumfundaze,” kusho uZulu.
Izithombe ezivezwe ngabafundi ngesimo sangaphakathi ekolishi beziveza amathoyilethi angasebenzi, umtapo wolwazi ongenazo izincwadi zokufunda namakamelo abafundi abenemibhede engaphezu kwemine ikamelo ngalinye.
UMchunu ukuqinisekile ukuthi ikolishi livaliwe nokuthi abafundi banikwe izincwadi ezithi mabaphume ezindlini. Kepha ukuphikile ukuthi abanikwanga isikhathi esenele.
“NgoLwesithathu umphathi wekolishi lonkana ukhiphe umyalelo wokuthi livalwe emuva kokuteleka kwabafundi. Ngibe sengibatshela kusenesikhathi ukuthi kudingeka baphume kulo kodwa ngenxa yokuthi bahlala kude ngibanike ithuba lokuthi balale ezindlini bahambe ekuseni namuhla (izolo),” kusho uMchunu.
Uthe abafundi batelekela ukuthi kuhlale abafundi abangabhalisile ngenxa yokuthi imiphumela yabo iyaphenywa ngoba kusolwa ukuthi kungenzeka ukuthi bakopela.
Uqhube wathi amathoyilethi ayalungiswa kanti akuyena ozogcwalisa izincwadi kumtapo wolwazi kepha othisha okumele basho ukuthi kufuneka ziphi izincwadi zabafundi.
Uthe akavotelwanga ukuthi ahole leliya kolishi ngakho ngeke atshelwe abafundi ukuthi sekufanele ayeke.
UMokoena uthe bahlele umbhikisho.